Horin kamida Wadaadadii Diinta Kirishtanka Amxarada oo baxsaday kana soo dhex Hadlay Jabhada Ginbot 7. | ogaden24
Horin kamida Wadaadadii Diinta Kirishtanka Amxarada oo baxsaday kana soo dhex Hadlay Jabhada Ginbot 7.
Nov 21, 2016 - Aragtiyood
Wararka ka imaanaya dhulka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya inay baxsadeen horin dhan oo kamida Wadaadadii Diintii Krishtan ee Hormuudka ka ahaa inta badan Kaniisadaha kuyaala magaaloyinka waawayn.
Wadaadan baxsaday ee Kirishtaamiyiinta ah oo tiradooda rasmiga ah lagu sheegay 13- ayaa kamid ahaa hogaaminta ugu caansan ee dhinaca diinta masiixiga, aadna looga yaqaano guud ahaan deegaamada dhulka Axmaarada.
Sida xogtan aan kuhelay hogaamiyayaashan Masiixiga ah ayaa ku biiray jabhada Gimbot 7 Arbanyoj ee kadagaalanta Gobolka Axmaarada waxayna go’aan sadeen in ay dadkooda u horseedaan kubiiritaanka Jabhada.
Qaar kamid ah hogaamiyayaasha Masiixiga ee baxsaday oo war fidiyeenka lahadlay ayaa sheegay in ay u adkaysan waayeen xoriyatul qowl la’aanta iyo gumaadka joogtada ah ee shacabka Xabashida lagu hayo.
Xubnahan katirsan hogaaminta diinta Masiixiga ayaa sheegay in shacabkooda ay u horseedayaan xoriyad gaadhsiin maadaama oo sida ay sheegeen wax nolol ah ayna shacabku kunoolayn waxayna sheegeen in ay doonayaan in ay ladagaalamaan xukuumada wayaanaha ee kali taliska ah.
Sidoo kale hogaamiye yaashan ayaa uu baaqay dhamaan shucuubta Itoobiya in ay u istaagaan sidii meel qudha looga soo wada jeedsan lahaa xukunkan dhiiga shacabka kunaaxay ee hormar iyo nolol diid ka ah.